सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू—अध्याय १० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू—अध्याय १०
आखिर, राज्यको युग विगतका समयहरूभन्दा फरक छ। मानवजातिले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यससँग यसले सरोकार राख्दैन; बरु, म मेरो काम गर्नको लागि व्यक्तिगत रूपमै पृथ्वीमा ओर्लेको छु, जुन कुरालाई न त मानवजातिले बुझ्‍न सक्छ न त पूरा गर्न नै सक्छ। धेरै वर्षसम्‍म, संसारको सृष्टि भएदेखि नै, मण्डली निर्माण गर्ने बारेमा मात्रै काम सम्बन्धित रहेको छ, तर राज्य निर्माण गर्ने बारेमा कसैले कहिल्यै सुन्दैन। मैले आफ्‍नै मुखले यो बोले पनि, यसको सारलाई बुझ्‍ने कोही छ? एक पटक म मानवको संसारमा ओर्लिएँ र तिनीहरूको कष्ट अनुभव गरेँ र अवलोकन गरेँ, तर मेरो देहधारणको उद्देश्यलाई पूरा नगरिकन त्यसो गरेँ। राज्यको निर्माण सुरु भएपछि, मेरो देहधारी शरीरले मेरो सेवकाइलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्‍यो; अर्थात्, राज्यका राजाले आफ्‍नो सार्वभौम शक्तिलाई औपचारिक रूपमा लिनुभयो। यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने मानव संसारमा राज्यको अवतरण—जुन वास्तविक प्रकटीकरणमा मात्रै सीमित थिएन—एउटा खास वास्तविकता हो; यो “अभ्यासको वास्तविकता” को अर्थको एउटा पक्ष हो। मानवले मेरो कार्यहरूमध्ये एउटा पनि देखेका छैनन्, न त तिनीहरूले मेरा वाणीहरूमध्ये एउटा नै सुनेका छन्। तिनीहरूले मेरा कार्यहरू देखे भने पनि, तिनीहरूले के पत्ता लगाउनेथिए र? अनि तिनीहरूले म बोलेको सुनेका भए पनि, तिनीहरूले के बुझेका हुनेथिए र? संसारभरि, सबै नै मेरो कृपा र दयाभित्र अस्तित्वमा छन्, तर सारा मानवजाति मेरो न्यायमा पर्छन्, र त्यसरी नै तिनीहरूले मेरा परीक्षाहरूको सामना गर्छन्। मानिसहरू निश्‍चित हदसम्‍म भ्रष्ट भएको अवस्थामा पनि, म तिनीहरूप्रति कृपालु र प्रेमिलो भएको छु; तिनीहरू सबै मेरो सिंहासनको सामने समर्पित हुँदा पनि, मैले तिनीहरूलाई सजाय दिएको छु। तैपनि, के मैले पठाएको कष्ट र शोधनमा नपर्ने कुनै मानव छ? धेरै मानिसहरू ज्योतिको लागि अन्धकारमा छामछुम गरिरहेका छन्, र धेरै आफ्‍ना परीक्षाहरूमा तीतो संघर्ष गरिरहेका छन्। अय्यूबमा विश्‍वास थियो, तर के तिनले आफ्‍नो उम्कने बाटो खोजिरहेका थिएनन् र? परीक्षाहरूका सामने मेरा मानिसहरू दह्रिलो गरी खडा हुन सक्‍ने भए पनि, यसलाई उच्‍चारण नगरिकन भित्र अन्तस्करणमा विश्‍वास गर्ने कोही छ? के बरु आफ्‍नो हृदयमा शङ्काहरू बोकेर मानिसहरूले आफ्‍नो विश्‍वासको आवाज निकाल्दैनन् र? परीक्षामा दह्रिलो गरी खडा हुने वा परीक्षा गरिँदा सच्‍चा रूपमा समर्पित हुने कुनै मानवजाति छैन। यदि मैले यो संसारलाई नहेरूँ भनेर मेरो अनुहार छोपिन भने, सारा मानवजाति मेरो ज्वलन्त हेराइमा गिर्ने थिए, किनभने म मानवजातिबाट केही पनि चाहन्‍न।
जब राज्यप्रतिको सलामी बज्‍छ—जुन सात गर्जनहरू गर्जिने समय पनि हो—यो आवाजले स्वर्ग र पृथ्वीलाई थर्काउँदै, आकाशलाई हल्‍लाउँछ र हरेक मानवजातिको मुटु धड्कने तुल्याउँछ। मैले त्यो राष्ट्रलाई नष्ट गरेको छु र मेरो राज्य स्थापना गरेको छु भन्‍ने प्रमाणित गर्दै, राज्यको राष्ट्रिय-गान ठूलो रातो अजिङ्गरको भूमिमा विधिवत् रूपमा खडा हुन्छ। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, पृथ्वीमा मेरो राज्य स्थापना हुन्छ। यस क्षणमा, म मेरा स्वर्गदूतहरूलाई संसारका हरेक राष्ट्रहरूमा पठाउन सुरु गर्छु ताकि तिनीहरूले मेरा पुत्रहरूलाई, मेरा मानिसहरूलाई गोठाला गरून्; यो मेरो कामको अर्को चरणका मागहरूलाई पूरा गर्नको लागि पनि हो। तैपनि, व्यक्तिगत रूपमा म त्यो ठाउँमा जानेछु जहाँ ठूलो रातो अजिङ्गर बेरिएर बसिरहेको छ, अनि त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्छु। सारा मानवजातिले मलाई मेरो शरीरमा चिनेपछि र शरीरमा मेरा कार्यहरूलाई देख्‍न सक्षम भइसकेपछि, ठूलो रातो अजिङ्गरको अखडालाई खरानीमा परिणत गरिनेछ र यसलाई नाम-निशाना नछोडीकन मेटाइनेछ। मेरा राज्यका मानिसहरूका रूपमा, तिमीहरूले मनैदेखि ठूलो रातो अजिङ्गरलाई घृणा गर्छौ, त्यसो हुनाले तिमीहरूले आफ्‍नो कार्यहरूद्वारा मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट पार्नैपर्छ, र यसरी तिमीहरूले अजिङ्गरलाई शर्ममा पार्छौ। के तिमीहरू ठूलो रातो अजिङ्गर घृणित छ भन्‍ने साँच्‍चै अनुभूति गर्छौ? के तिमीहरूले यो राज्यको राजाको शत्रु हो भन्‍ने साँच्‍चै अनुभव गर्छौ? के तिमीहरूले मेरो लागि सुन्दर गवाही दिन सक्छौ भन्‍ने तिमीहरूमा साँच्‍चै विश्‍वास छ? के तिमीहरूले ठूलो रातो अजिङ्गरलाई जित्‍न सक्छौ भन्‍नेमा तिमीहरू साँच्‍चै निश्‍चित छौ? तिमीहरूलाई मैले माग्‍ने कुरा यही हो; मलाई चाहिने एउटै कुरा भनेको तिमीहरू यो चरणमा पुग्‍न सक भन्‍ने हो। के तिमीहरूले यसो गर्न सक्‍नेछौ? के यो हासिल गर्न सक्छौ भन्‍ने तिमीहरूमा विश्‍वास छ? मानव वास्तवमा के गर्न सक्षम छन्? के बरु म आफैले गर्नुपर्ने होइन र? युद्धमा संलग्‍न हुने स्थानमा नै म व्यक्तिगत रूपमा ओर्लन्छु भनेर म किन भन्छु? मलाई तिमीहरूको विश्‍वास चाहिन्छ, तिमीहरूका काम होइन। मानवजाति मेरा वचनहरूलाई सोझो रूपमा स्वीकार गर्न सबै असमर्थ छन्, बरु तिनीहरू तिनलाई छड्के नजरले मात्रै हेर्छन्। के यसले तिमीहरूका उद्देश्यहरू पूरा गर्न सहयोग गरेको छ? के तिमीहरूले यसरी मलाई चिन्‍न पुगेका छौ? इमानदारीपूर्वक भन्‍नुपर्दा, पृथ्वीका मानवमध्ये, मलाई मेरो अनुहारमा सिधा नजरले हेर्न सक्‍ने क्षमता भएको एक जना पनि छैन, र मेरा वचनहरूका शुद्ध र विशुद्ध अर्थलाई प्राप्त गर्न सक्‍ने क्षमता भएको एक जना पनि छैन। त्यसकारण मैले मेरा लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न र मानिसहरूका हृदयमा मेरो आफ्‍नो साँचो स्वरूप स्थापना गर्नको लागि, पृथ्वीमा मैले अभूतपूर्व परियोजनालाई अगि बढाएको छु। यसरी, मानिसहरूमाथि धारणाहरूले शक्ति चलाउने युगलाई म अन्त्य गर्नेछु।
आज, म ठूलो रातो अजिङ्गरको देशमा ओर्लिरहेको मात्रै छैन, तर सारा आकाशलाई हल्‍लाउँदै, म सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रूपलाई पनि परिवर्तन गर्दैछु। के मेरो न्यायको सामना नगर्ने कहीँ त्यस्तो कुनै ठाउँ छ? के मैले वर्षाउने विपत्तिहरू नपर्ने कुनै एउटा ठाउँ छ? म जहाँ-जहाँ जान्छु, मैले “विपत्तिका अनेक बीउहरू” छरेको छु। मैले काम गर्ने एउटा तरिका यही हो, र यो मानवजातिको मुक्तिको कार्य हो भन्‍नेमा कुनै शङ्का छैन, अनि मैले तिनीहरूलाई दिने कुरा भनेको एक प्रकारको प्रेम नै हो। अझै धेरै मानिसहरूलाई मलाई चिन्‍ने र मलाई देख्‍न सक्‍ने तुल्याउने मेरो इच्‍छा छ, अनि, यसरी, तिनीहरूले धेरै वर्षसम्‍म देख्‍न नसकेका तर जो अहिले वास्तविक हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्‍वरलाई तिनीहरूले सम्‍मान गर्न पुग्छन्। के कारणले मैले संसारको सृष्टि गरेँ? मानव भ्रष्ट भएर पनि, मैले किन तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सर्वनाश गरिनँ? के कारणले गर्दा सारा मानवजाति विपत्तिहरूको बीचमा जिउँछन्? देह धारण गर्नुमा मेरो उद्देश्य के थियो? जब म मेरो काम गरिरहेको हुन्छु, मानवजातिले तीतोलाई चाख्‍न मात्र होइन, तर मीठोलाई पनि चाख्‍न सिक्छ। संसारका सारा मानिसहरूमध्ये, को मेरो अनुग्रहभित्र जिउँदैन र? यदि मैले मानवजातिलाई भौतिक आशिषहरू प्रदान नगरेको भए, संसारको प्रशस्तताको आनन्द कसले लिन सक्थ्यो र? के मेरा प्रजाका रूपमा रहेको तिमीहरूको स्थान तिमीहरूलाई लिन दिनु आशिष हुन सक्छ? तिमीहरू मेरा प्रजा नभएको, तर सेवाकर्ता भएको भए, के तिमीहरू मेरा आशिषहरूभित्र अस्तित्वमा रहिरहेका हुने थिएनौ र? मेरा वचनका उत्पत्तिलाई बुझ्‍न सक्‍ने तिमीहरूमध्येमा एक जना पनि छैन। मानवता—मैले तिनीहरूलाई प्रदान गरेको पदवी नामहरूलाई बहुमूल्य ठान्‍नु त कता हो कता, तिनीहरूमध्ये धेरैले आफ्‍नो हृदयमा “सेवाकर्ता” पदवी नामको कारण द्वेष राख्छन्, र धेरैले “मेरा प्रजा” भन्‍ने पदवी नामको कारण मेरो लागि आफ्नो हृदयमा प्रेम पैदा गर्छन्। कसैले पनि मलाई मूर्ख बनाउने प्रयास गर्नुहुँदैन; मेरा आँखा सर्व-देखी छन्! तिमीहरूमध्ये कसले तत्परतासाथ ग्रहण गर्छौ, तिमीहरूमध्ये कसले पूर्ण आज्ञापालन दिन्छौ? यदि राज्यको सलामी बजेन भने, के तिमीहरू साँच्‍चै अन्त्यसम्‍मै समर्पित हुने थियौ र? मानव जे गर्न र विचार गर्न सक्षम छन्, र तिनीहरू जति हदसम्‍म जान सक्छन्—यी सबै कुरालाई मैले धेरै पहिले नै अघिबाटै नियुक्त गरिसकेको छु।
मेरो मुहारको ज्योतिको मेरो ज्वालालाई धेरैजसो मानिसहरूले स्वीकार गर्छन्। मेरो प्रोत्साहनद्वारा उत्प्रेरित भएर, धेरैजसो मानिसहरू खोजी कार्यमा आफैलाई अघि बढाउन तत्पर बनाउँछन्। जब शैतानका शक्तिहरूले मेरा जनहरूलाई आक्रमण गर्छन्, म तिनीहरूलाई धपाउन त्यहीँ हुन्छु; जब शैतानका षडयन्त्रहरूले तिनीहरूका जीवनमा बरबादी ल्याउने गर्छ, म त्यसलाई लुरुक्‍क परी भाग्‍ने तुल्याउँछु, र यो एक पटक गएपछि कहिल्यै फर्कँदैन। पृथ्वीमा, अनेक किसिमका दुष्ट आत्‍माहरू सँधै नै विश्राम स्थलको खोजीमा हुन्छन्, र उपभोग गर्नको लागि सँधै मानव लासहरू खोजिरहन्छन्। ए मेरा मानिसहरू हो! तिमीहरू मेरो वास्ता र सुरक्षाभित्र नै रहनुपर्छ। कहिल्यै भ्रष्ट नहोओ! कहिल्यै पनि लापरवाहीसाथ व्यवहार नगर! मेरो घरमा तैँले आफ्‍नो बफादारीता प्रदान गर्नुपर्छ, र बफादारीताद्वारा मात्रै तैँले दियाबलसका चलाकीहरूका विरुद्धमा प्रतिकार हमला गर्न सक्छस्। कुनै पनि हालतमा तैँले विगतमा जस्तो मेरो अगाडि एउटा कुरा गर्ने र मेरो पछाडि अर्को कुरा गर्ने व्यवहार गर्नु हुँदैन; यदि तैँले यस्तो व्यवहार गरिस् भने, तँ पहिले नै छुटकारा भन्दा पर हुन्छस्। के मैले पर्याप्त रूपमा यस्ता वचनहरू उच्‍चारण गरिसकेको छैन र? मानवजातिको पुरानो स्वभाव सुधार गर्न नसकिने भएकोले नै मैले मानिसहरूलाई बारम्‍बार स्मरण गराउनु परेको छ। न्यास्रो नबन्! मैले भन्‍ने सबै कुरा तिमीहरूको गन्तव्यलाई निश्‍चित गर्नको खातिर नै हो! शैतानलाई चाहिने भनेकै बेइमानी र फोहोरी स्थान हो; तिमीहरू निषेधाज्ञाप्रति समर्पित हुन इन्कार गर्दै, जति उद्धार गर्न नसकिने छौ र तिमीहरू जति भ्रष्ट हुन्छौ, ती अशुद्ध आत्‍माहरू तिमीहरूलाई आक्रमण गर्ने कुनै पनि मौकाको लागि त्यति नै लागि पर्छन्। यदि तिमीहरू यस विन्दुसम्‍म आइपुगेका छौ भने, तिमीहरूको बफादारीता कुनै पनि वास्तविकता विनाको फोकट गफ बाहेक केही पनि होइन, अनि अशुद्ध आत्‍माहरूले तिमीहरूको संकल्पलाई सर्लक्‍कै निल्‍नेछन् र यसलाई मेरो काममा वाधा दिनको लागि प्रयोग गरिन अनाज्ञाकारिता र शैतानिक षड्यन्त्रमा रूपान्तरण गर्छन्। त्यहाँबाट, तिमीहरूलाई म कुनै पनि बेला प्रहार गर्न सक्छु। यो अवस्थाको गम्‍भीरतालाई कसैले बुझ्‍न सक्दैन; आफूले सुन्‍ने कुरामा मानिसहरू कानमा तेल हालेर बस्छन्, र अलिकति पनि सचेत हुँदैनन्। विगतमा गरिएको कुरालाई म स्मरण गर्दिनँ; के तँ अझै पनि मैले फेरि एक पटक “बिर्सेर” तँप्रति उदार हुनको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको छस्? मानवले मेरो विरोध गरे तापनि, म यसलाई ईख बनाउनेछैन, किनभने तिनीहरू अत्यन्तै साना कदका छन्, र मैले तिनीहरूबाट अत्यन्तै उच्‍च माग गरेको छैन। मैले माग गर्ने कुरा भनेको तिनीहरू भ्रष्ट नहोऊन्, र तिनीहरू निषेधप्रति समर्पित होऊन् भन्‍ने हो। यो सर्त पूरा गर्नु अवश्य नै तिमीहरूको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा होइन, हो त? धेरैजसो मानिसहरू तिनीहरूका आँखाको अभिलाषा पूरा गर्नको लागि मैले अझै बढी रहस्यहरू प्रकट गरेको होस् भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। तैपनि, तैँले स्वर्गका सारा रहस्यहरू बुझिस् भने पनि, त्यो ज्ञानलाई तैँले वास्तवमा के नै गर्न सक्छस् र? के यसले मप्रतिको तेरो प्रेमलाई बढाउने थियो र? के यसले मप्रतिको तेरो प्रेमलाई जगाउने थियो र? म मानवलाई कम सम्‍झँदिन, न त तिनीहरूको बारेमा म हल्का रूपमा फैसला नै गर्छु। यदि यी मानवका वास्तविक परिस्‍थितिहरू थिएनन् भने, म तिनीहरूलाई त्यति सजिलै कहिल्यै थिइनँ। विगतको बारेमा विचार गर: मैले तिमीहरूलाई कति पटक निन्दा गरेको छु? मैले तिमीहरूलाई कति पटक कम सम्‍झेको छु? तिमीहरूको वास्तविक परिस्‍थितिहरूलाई ध्यानै नदिइ मैले तिमीहरूलाई कति पटक नियालेको छु? मेरा वाणीहरूले कति पटक तिमीहरूलाई पूरा हृदयबाट जित्‍न असफल भएको छ? तिमीहरूभित्रको गुंजायमान रागको तारलाई प्रहार नगरीकन म कति पटक बोलेको छु? तिमीहरूमध्ये कसले, मैले तिमीहरूलाई प्रहार गरेर अतल कुण्‍डमा फ्याँक्‍नेछु भनी अत्यन्तै डराएर, भय र कम्‍पको साथ मेरो वचनलाई पढेका छौ? मेरा वचनहरूका परीक्षाहरूमा को स्थिर हुँदैन? मेरा वाणीहरूभित्र अख्तियार छन्, तर यो मानवलाई लापरवाहीको साथ न्याय गर्नको लागि होइन; बरु, तिनीहरूको वास्तविक परिस्‍थितिहरूलाई ध्यान दिँदै, म तिनीहरूलाई मेरा वचनभित्र रहेका अर्थ निरन्तर प्रकट गरिदिन्छु। वास्तवमा, के मेरा वचनहरूमा रहेका मेरो सर्वशक्तिमान् शक्तिलाई पहिचान गर्न सक्‍ने कोही छ? विशुद्ध सुन, जसद्वारा मेरा वचनहरू बनिएका छन्, तिनलाई प्राप्त गर्न सक्‍ने कोही छ? कति वटा वचन मैले बोलिसकेको छु? के कसैले तिनलाई कहिल्यै बहुमूल्य ठानेका छन्?
अघिल्लो: सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू—अध्याय ८
सबै मानिसहरूमा हुने साधारण समस्या चाहिँ यो हो कि उनीहरूले सत्यता बुझ्छन् तर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नलाई असफल हुन्छन्। एकातिर उनीहरू मूल्य...